नवलपरासीमा ७ वटा बम फेला, एउटा पड्कियो – Satya Samachar
Home/ समाचार/नवलपरासीमा ७ वटा बम फेला, एउटा पड्कियो
नवलपरासीमा ७ वटा बम फेला, एउटा पड्कियो
परासी । नवलपरासीमा बमै–बम फेला परेपछि स्थानीयहरु त्रसित बनेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा धमाधम बम तथा विस्फोटक पदार्थ भेटिन थालेपछि स्थानीयहरु त्रसित बनेका थिए ।
साँझ ५ बजेसम्म पुर्वी तथा पश्चिमी नवलपरासी गरि ७ वटा बम तथा विस्फोटक पदार्थ भेटिएको छ जसमध्ये एउटा आफैँ पड्कियो । बाँकी ७ वटालाई नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले जनाएको छ ।
बिहान गंैडाकोट नगरपालिका–९ जयश्री खोला नजिकै फेला परेको शंकास्पद बस्तु बम नरहेको पुष्टि भएको थियो । त्यस्तै दिउँसो जयश्री खोला नजिकैको प्लटिङ्गमा फेला परेको शंकास्पद बस्तु होममेड २ वटा सुतली र ३ वटा पेट्रोल बम रहेको पुष्टि भएको छ । जसलाई डिस्पोजल समेत गरि सकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यता बिहान ११ः३० बजे कावासोती–८ फलफुल चोक एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट १ सय मिटर दुरीमा ठूलो आवाजले पड्केको बमले स्थानीयमा निकै त्रास फैलिएको थियो ।
त्यसपछि देवचुली नगरपालिका–११ दलदलेमा पनि फेरि अर्काे ल्यापटपको ब्याट्रीमा तारबार बाँधी बिस्फोटक पदार्थ राखिएको अवस्थामा फेला प¥यो । जसलाई पनि बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कावासोतीमा पड्केको बमले कुनै मानविय तथा भौतिक क्षति नभएपनि स्थानियहरु निकै त्रसित बनेका थिए । यसरी ठाउँमा–ठाउँमा फेला परेको बमलाई डिस्पोजल गर्न सुरक्षाकर्मी तथा बम डिस्पोजल टोलीलाई धौँ–धौं समेत भएको थियो ।
नेकपा –विप्लव) को बन्दले पुर्वी नवलरासी ठप्पै थियो भने पश्चिम नवलपरासी पनि आंशिक रुपमा प्रभावित बनेको थियो । यता राती १ बजेको समयमा पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ मा रोकीराखेको दुई ट्रकमा अज्ञात समुहद्धारा आगजनी समेत भएको थियो ।
आगोले दुवै ट्रकको पछिल्लो दुई टायर जलेको र समयमै आगो निभाएर ट्रकलाई पुर्ण क्षति हुनबाट जोगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अन्ततः आफ्नो जमिन बेच्दिन भन्दा निवस्त्र बनाइ पिटिएकी दिलमायाले न्याए पायिन …पूरा हेर्नुहोस
खुशीले शारीरिक सम्बन्ध गर्ने , अनि बलात्कार भन्दै युवालाई फसाउने महिलालाई सजाय हुँदैन ?….
आफै सपिङ्ग गरेर ट्रली तान्दै अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा, हाम्राले कहिले सिक्ने ? (फोटो)
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा होली खेलेर नेपालीले फोहोर गरेपछि मेयर आक्रोशित
नेपाल अाइडल-२ लाइभ हेर्नुहाेस्